Volon-katsaka : Ho an'ny aretin'ny tatavia sy sira be loatra
Betsaka ireo ketriketrika nampiasain’ny ntaolo hitsaboana aretina mifandraika amin’ny tatavia, teo amin’ny malagasy, hatramin’ny vehivavy bevohoka. Isan’izany ny volon-katsaka. Raha mahatsikaritra isika dia tsy tapaka an’ireny ny mpivarotra tapa-kazo eto amintsika.
Hiteraka kambana : Tsy voatery hodidiana
« Bevohoka ny zanako voalohany aho, rehefa nanao « echographie » izahay dia hay kambana ilay izy. Voatery atao « césarienne » ve aho rehefa hiteraka ? » : Noro 26 taona
Vao teraka fa tsy misy nono ...Manoro ny dokotera !
« Sahirana be aho nampinono ny zanako vao teraka. Tany amin’ny andro fahatelo tany mantsy vao niakatra ny nonoko. Inona no mety mahatonga izany ? Inona no atao hampiakarana ny nono ? » Mino, 31 taona.
Bevohoka : Fadio ny manaraka « régime » !
Mihinana ho an’ny olon-droa tokoa, araka ny fomba fiteny, ny vehivavy mitondra vohoka. Tsy resaka habetsahan’ny sakafo anefa no tiana tsindriana eto fa ny kalitaon’ny sakafo. Toy izao ny torohevitry ny Pavillon Sainte Fleur, mahakasika io sakafo kalitao tokony hanin’ny vehivavy mitondra vohoka io.
AMADIA FARAVOHITRA : Lasa hatramin’ny 100 isan’andro ireo mitily diabeta
Tafiakatra 70 ka hatramin’ny 100 isan’andro amin’izao ireo olona tonga manao fitiliana ny aretina diabeta eny anivon’ny AMADIA Faravohitra raha 60 ka hatramin’ny 80 isan’andro teo aloha.
Hopitaly manarapenitra Mitsinjo ao Toliara : Nahazo fitaovam-pitsaboana sy fanafody
Miara-miasa ny OMS sy ny Firenena Mikambana, ny Croix Rouge Malagasy ary ny Fikambanana Fitia hampitaovana ireo hopitaly sy ivon-toeram-pitsaboana eto amin’ny faritra Analamanga,
CHRR Manakara Nahazo fitaovam-pitsaboana sy "Ambulance"
Mitohy hatrany ny fampitaovana ireo toeram-pitsaboana ataon'ny Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny ady
tsy mifanaraka amin’ny volan’ny vohoka ny habeny sy ny fitomboan’ny vatany na koa ny lanjany. Inona no mety hahatonga izany?
Noho ny antony maro
Betsaka ireo antony mahatonga ny R.C.I.U. Mizara 3 lehibe izany.
· Avy amin’ny reniny noho ny tsy fahampian-drà; tsimok’aretina toy ny “toxoplasmose” …; ny bonibony (rubéole); ny aretina avy amin’ny virosy ( C.M.V toy ny cytomegalovirus); ny fifohana sigara sy fisotroana alikaola ary ny fidorohana zava-mahadomelina.
· Avy amin’ny zaza: toy ny tsy fahatomombanan’ny tarazo (anomalie chromosomique): trisomie 21 na 18.
· Avy amin’ny ahitra: tsy manao ny asany tsara izy amin’ny fanomezana ny sakafo avy amin-dreniny ilay zaza; noho ny fiakaran’ny tosi-drà amin’ny vohoka.
Tsy miantraika amin’izany
Na izany aza, miankina amin’ny nahatonga ilay R.C.I.U no mampisy fiantraikany na tsia eo amin’ny zazakely izany, rehefa teraka. Raha ny fiakaran’ny tosi-drà ohatra no nahatonga ilay fahataran’ny fitomboana, dia hitombo ara-dalàna ihany ilay zaza rehefa teraka. Hafa kosa raha noho ny tarazo satria tsy misy na inona na inona azo atao. Ary ho an’ny aretina indray, raha voatsabo tsara izany nandritra ny vohoka, dia tsy hanohintohina ny fitomboan’ny zaza mihitsy rehefa teraka.
Misafo ara-dalàna, manao fitiliana amin’ny “toxoplasmose” sy ireo tsimok’aretina samihafa, ary jerena ny tosi-drà. Misafo in-4 raha kely indrindra mandritra ny vohoka. Manao “échographie” in-3 na in-4 mandritra ny vohoka, farafahakeliny.
Isaorana ny dokotera Robert Rakotondramanana
Gynécologue – Obstétricien,